Ukusula Okumanzi Kwenja: Okungcono Kakhulu Kwesilwane Sakho | Izinja Umhlaba
Ukusula okumanzi kwezinja
I-Encarni Arcoya | | Izesekeli zezinja
Izinja, njengezilwane eziyizona, zingabonakala. Inkinga ukuthi izikhathi eziningi sizama ukususa la mabala ngokuwahlikihla, futhi esikhundleni sokwenza okuhle esilwaneni esifuywayo siyazilimaza. Ngakho-ke, ukusula okumanzi kwezinja bangakusiza.
Kunokusetshenziswa okuningi: kusukela ekusizeni imidlwane ukuyihlanza lapho izikhulula (noma inyathela kuyo) ukuhlanza izidladla zabantu abadala ngemuva kokuhambahamba emgwaqweni. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izinja ezisula kakhulu futhi yini okufanele uyicabangele ngaphambi kokuzithenga? Qhubeka ufunde futhi uzothola.
1 Izinhlobo zokusula okumanzi kwezinja
1.1 Izinto ezibolwayo
1.3 Ngephunga le-talcum
1.4 Nge-aloe vera
1.6 Ngaphandle kwesiqholo
2 Ngabe kubalulekile ukubulala amagciwane ezinqeni zenja uma ivela emgwaqweni ngenxa yeCovid-19?
3 Ngingakusebenzisa ukusula izingane ukuhlanza inja?
4 Ungathenga kuphi ukusula inja
Izinhlobo zokusula okumanzi kwezinja
Ama-Inodorin Wipes ...
Inhlanzeko Yezinja Zangasese ...
PORRINI Ukusula Inhlanzeko ...
Into yokuqala okufanele uyazi mayelana nokusulwa kwezinja ukuthi alukho uhlobo olulodwa nje. Ngisho nomkhiqizo owodwa. Kungakho kungaba nzima kakhulu ukukhetha eyodwa noma enye.
Noma kunjalo, kufanele ugcine inja yakho engqondweni. Unaso isikhumba esibucayi? Awuthandi iphunga lamakha noma i-cologne oyigqokayo? Ngabe ujwayele ukuba nesikhumba esibucayi futhi esiklwebhe noma umdala? Konke lokho kuzokwenza ukhethe uhlobo oluthile noma olunye.
Ngakho, emakethe ungathola:
Ukusula Ukuzilolonga kukaPogi -...
Bangama-wipe alahlwayo. Lokhu kushibhile futhi kwenzelwa ukusetshenziswa okukodwa kuphela. Ngaphezu kwalokho, banakekela imvelo ngokubola kwelanga, amanzi, izitshalo ...
Izinja ezivame ukuhamba ezindaweni ezinamadwala, amahlathi, njll. Bangagcina benze ukulimala okuthile, ikakhulukazi emilenzeni. I-chlorhexidine isetshenziswa, isibonelo, ukuphathwa amazinyo, noma ukubulala amagciwane.
Uma wesaba uCovid, lokhu kungaba enye ye kungcono ukuhlanza inja yakho ngaphambi kokuba ifike ekhaya ukuze ungakuvikele kuphela, kepha futhi nenja yakho.
Abanye abantu banomuzwa wokuthi uma inja isula inganuki, ngeke baqede ukuhlanza. Abanye bafuna inja ukuthi "inuke kamnandi" lapho ihlanza. Futhi kulokhu ungathola ama-wipe ngephunga le-talcum, elisikhumbuza ngobuntwana bethu.
Siyazi ukuthi i-aloe vera inezinzuzo eziningi, ikakhulukazi esikhumbeni. Ngakho-ke ezinye izinja zokusula inhlaba zingaba ngcono kakhulu kulabo ube nesikhumba esibucayi noma udinga ukunakekelwa okwengeziwe.
Zibonakala ngokushiya iphunga elimnandi endaweni oyifaka kuyo. Kulokhu, izinja, kungaba emzimbeni wawo wonke, kwizidladla zawo, njll.
Ama-Dhohoo Toilet Wipes ...
Ilungele lezo zinja ezingathandi iphunga "lomuntu". Basula lokho "Abanuki" ngale kwephunga abanalo lomkhiqizo abaphethe ukuwuhlanza.
Ngabe kubalulekile ukubulala amagciwane ezinqeni zenja uma ivela emgwaqweni ngenxa yeCovid-19?
Lapho kubheduka ubhadane lweCovid, kwaba nokungazi okuningi. Abanye beluleke ngokuthi, uma bebuyela emakhaya, kufanele kuhlanzwe amanzicathulo ezicathulweni ngenhloso yokuvimbela igciwane ukuthi lingene ezindlini. Futhi, kusobala, kunconyiwe ukuthi abanikazi bezinja benze okufanayo ngezilwane zabo, besebenzisa izinselele ezimanzi zezinja.
Ngempela Akusekho ngenxa yokuba khona noma hhayi kweCovid, kepha kungenxa yenkinga yenhlanzeko. Inja ayizigqoki izicathulo, ngakho-ke iyaqhubeka inyathela phansi, engagcwala amagciwane, amagciwane kanye namagciwane. Uma unezingane, uyazi ukuthi inhlanzeko kufanele inakekelwe, okusho ukuthi inja kumele ihlanzeke, njengomhlabathi emi kuwo. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi ubulale amagciwane ezinqeni zenja ngendlela ejwayelekile, hhayi kuphela ngenxa yokuba khona kwe-coronavirus.
Manje, futhi esimweni esithile seCovid? Ushaye khona, kungcono ukuyikhipha ngamagciwane ingakangeni Njengoba ingeke inyathele phansi kuphela endlini, kepha ingakhotha nezidladla zayo futhi, ngayo, ikhulise amathuba okutheleleka (njengoba kube nezigameko zezinja namakati athelelekile).
Ngingakusebenzisa ukusula izingane ukuhlanza inja?
Abanikazi abaningi bezinja banquma ukusebenzisa ama-baby wipes ngokusetshenziswa kwesilwane (isilwane). Kepha iqiniso ukuthi akunconyiwe. Futhi, noma kunezinto ezithile zokusetshenziswa kwabantu esingazisebenzisa ezilwaneni, kukhona ezinye ezidala izinkinga eziningi kunezinzuzo. Futhi ukusulwa kwezingane kungenye yazo.
Kungani lezi zisuli zingasetshenziswa? Kungenxa yokuthi isikhumba sesilwane sihlukile kwesomntwana. Yebo, siyazi ukuthi lawo masula athambile futhi awathathi hlangothi ngangokunokwenzeka, kepha i-pH yengane akuyona eyenja futhi, kwesinye isikhathi, ukusebenzisa lokhu kungagcina sekucasula isikhumba senja, noma ngisho ukuhlaba, okungukuthi uzoyiklwebha futhi uzilimaze.
Ngakho-ke, ngangokunokwenzeka, asikukhuthazi ukuthi usebenzise lezi futhi sincoma lezo ezithile zezinja. Lokhu kusulwa kwezinja ngenhlanzeko kwenziwa futhi kwenziwa ngezinto ezaziwayo ukuthi azithinti isikhumba sesilwane futhi, ngaphandle kokuthi zizwela kakhulu, ngeke ube nezinkinga.
Ungathenga kuphi ukusula inja
Awuqinisekile ukuthi ungathenga kuphi ukusula inja? Ungakhathazeki, sincoma ezinye izindawo lapho ungazithenga khona. Qaphela!
Amazon: I-Amazon inenzuzo yalokho bathengisa ukusula okumanzi kwezinja zemikhiqizo eminingi, futhi kwesinye isikhathi ungathola ngisho namaphakethe ashibhile. Izinhlobo ezahlukahlukene, ubuningi nokuhlukahluka. Kuyinzuzo yalesi sitolo ngaphezu kwezinye ezincane.
UMercadona: UMercadona uyazi ukuthi izilwane ezifuywayo zibaluleke kangakanani emindenini. Futhi yingakho emgqeni wayo wemikhiqizo enikezelwe ezilwaneni ungathola okuhlukahlukene (yize kuwumkhiqizo owodwa kuphela). Esimweni sokusulwa okumanzi kwezinja, asikwazanga ukuthola. Ngakho-ke uma bekutshela ukuthi usebenzise izingane, ungazithengi, ngoba azizilungele izinja.
kiwiko: IKiwoko isitolo esigxile ezifuyweni futhi, kulokhu, uzokwazi ukuthola ukusulwa kwezinja. Asikwazi ukukutshela ukuthi uzothola noma yimuphi umkhiqizo, kepha lawo athengisayo yingoba azi kahle ukuthi adayisiwe nokuthi abanikazi abaningi bayajabula ngabo.
TendenimalNjengoKiwoko, iTíanimal ibuye igxile ezifuyweni. Ngokuqondene nokusula okumanzi kwezinja, uzokwazi ukuthola okuhlukahlukene okucishe kufane nakwezinye izitolo. Zizohluka kweminye imikhiqizo, nangamanani, kepha okuhle ukuthi lawa athembekile ngochwepheshe abangochwepheshe Futhi ungaqiniseka ukuthi bayawenza umsebenzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ukusula okumanzi kwezinja
Ama-shampoo amahle kakhulu ezinja: ukuthi iyiphi ongayikhetha ngohlobo ngalunye